I-China China Factory i-8M ye-10M enemibala eyahlukileyo yokwenza i-Air Trick Pool yeFlatable ye-Yoga Mat 0395 yokuvelisa kunye nefektri | Yamazonhome
I-China Factory i-8M 10M enemibala eQulunqileyo yoMoya oQhelekileyo wePhuli yokudada i-Yoga Mat 0395
Igama lebrand: Yamazonhome
Igama lemveliso: Inflatable Yoga Mat
Amanani eMveliso: Amal-0395
Indawo yokuvelisa: Weifang, Shandong
Material: PVC kunye EVA
Ubukhulu: 600 * 100 * 10cm, 200 * 33 * 3cm, wena
Umbala: mnyama, luhlaza, pink, luhlaza, zilungelelanisiwe
Ixesha lokulungiselela isampulu: malunga neveki enye
Igama leProduct Ixabiso leYoga Mat / Umkhondo womoya
2 Igama leBrand YITEK
5. Izinto eziphathekayo I-DWF kunye nePVC
6 ubukhulu 6x1x0.1 M.
7.Umbala Mnyama, Bomvu, Luhlaza, Luhlaza, Mthubi, Mfusa
Ngaphezulu kwe-10 Imibala
Uphawu lweMveliso 8 Ephathekayo & edadayo
9. UMOQ Isiqwenga esinye
Ixesha leSampuli eli-10 4-7days
11.Ukusetyenziswa Imidlalo yaManzi, ukuTumbling, iYoga, iGymnastics, njl
12. Izibuko I-ShangHai
13.Iphakheji NgokweSicelo seKlayenti
Iiplagi ezinokuthelekiswa kunye neeplagi ezingenayo
Iiplagi ezinokuthelekiswa kunye neeplagi ezinokungena zenziwe ngokuchanekileyo ukuba zibe nenqanaba eliphezulu lokungenisa umoya, kuthintele uthuli lokukhupha kwaye lubekwe ngokungacwangciswanga ngaphandle kokuvuza.
Ukupeyinta ekumgangatho ophezulu kwandisiwe ngaphakathi, kwaye izinto zokuzoba zenziwe ngeringi kunye nezinto zokuzoba, ezinamandla wokuthwala kwaye akukho deformation.
Push isibambo lobushushu iwelding technology eliphezulu kakhulu kuyolula ubomi inkonzo imveliso, kuphucula ukusebenza imveliso kunye nokhuseleko umsebenzisi.
Isifundo esinzulu kunye nokuziqhelanisa nokubamba kabini. Sigqiba imveliso nganye njengomsebenzi wezandla, ke ngoko sinobuchwephesha bokupakisha bokuphinda kabini.
Inzuzo yethu yenkampani
Inenkqubo engqongqo yolawulo lomgangatho kwaye iyonwabela igama elihle kwimarike. Amagcisa anobuchule kunye nezixhobo ezigqibeleleyo zibonelela ngesakhono semveliso esihle kakhulu kunye nesakhono esomeleleyo sokuyila, kunye nobuncinci be-odolo yobungakanani bemida ekumgangatho ophezulu weemveliso. Amaxabiso okhuphiswano lwefektri kunye neenkonzo zokuma ezisemgangathweni ophezulu zokubonelela ngeenkonzo zokuhambisa ngokukhawuleza nangokukhawuleza kubathengisi abakwi-Intanethi abanjengoAmazon.
1. FedEx / DHL / UPS / EMS, Ukungena umnyango nomnyango;
2. Ngomoya okanye ngolwandle ukuba ubukhulu bukhulu, ukufunyanwa kwesikhululo senqwelomoya / izibuko;
3. Abathengi bachaza abathumeli beempahla okanye iindlela zokuhambisa ezinokuxoxwa!
Ixesha lokuHanjiswa: 1 ~ 3 yeentsuku zokusebenza ukuba unesitokhwe; Iintsuku ezi-3-7 ukuba ziqala iodolo, kuxhomekeke kubungakanani.
1.Malunga noMbala kunye nobukhulu:
Imibala eyahlukeneyo kunye nobukhulu ngokhetho lwakho. Ukongeza, unokubonelela ngobungakanani bakho kumzi-mveliso wethu ukuze wenze ngokwezifiso.
bag, iibhokisi, ibhokisi umbala isiko, iingxowa ephothiweyo.
Ixesha malunga neMveliso:
Ixesha eliqhelekileyo ziintsuku ezi-5 ukuya kwezi-10, ukuba kukho into encinci engxamisekileyo, sinokuyenza kwangoko. Ngokwahlukileyo, ukuba i-qty inkulu kakhulu, siya kubona i-qty ukuqinisekisa ixesha lokuhambisa.
Imibuzo iya kuphendulwa ngexesha lethu lokuqala lokufumana. sinyanisekile, siyingcali, siya kuhlala sisecaleni kwakho, siya kukukhonza ngaphambi kwendawo yoku-odola de uthengise ngayo.
I-EXW, i-FOB, i-CIF, umnyango nomnyango, naziphi na kuzo ziyafumaneka kuthi.
6. Malunga nokuHlola:
Ukujonga izinto ngaphambi kokuba umthengisi wezinto asinike zona.
Ukujonga ukusika izinto ezisikiweyo ngaphambi kokuqala ukuvelisa.
Ukujonga konke ukuthunga kunye nenkqubo xa uvelisa.
Ukujonga iiphedi ezinokukhutshwa kwakhona ngaphambi kokupakisha.
Ukujonga ixabiso xa lipakishwe ebhokisini
Ukujonga zonke iibhokisi ngaphambi kokuba zithunyelwe.
7.Inqubo yesiqhelo epheleleyo yemveliso yeebhegi:
Imveliso yobuninzi qinisekisa-Thenga-ukusika-ukuqala ukuqala ukuvelisa kunye nokuthunga inyathelo elinye ngokunyathela-ukuhambisa-ukuthunyelwa.
Egqithileyo Ibhedi elula yeWindsor Solid Wood Bedroom Bed Princess Princess # 0114
Okulandelayo: Isibambo esimagqagala somzobo ophindwe kabini webhedi yikhabinethi esecaleni kweenkuni # 0121
I-Nordic Simple Wood Solid inokuphakanyiswa kunye neLowe ...
I-Nordic elula ye-Wood Solid yeNdlu encinci ...
Uluhlu lweGumbi lokuPhila uMvundla weNdawo 0246
I-Gymnastics Air Mat 2m 3m 4m Inflat yobungcali ...
Uyilo oluNcinci lweSakhelo seNkuni #Sofa yaBantwana 0185